Makiinada korontada lagu xiro ama makiinadaha makiinada garka | Ragga Stylish
Makiinada korontada lagu xiro ama makiinadaha makiinada garka?
Intii lagu guda jiray waqtigaan oo dhan waan kaala hadalnay waa maxay waqtiga ugu fiican ee la xiiro, ku saabsan waa maxay xiirista saxda ah ee nooca maqaarkaaga ama ku saabsan qaar tilmaamaha xiirashada qumman.
Maanta waxaan rabnaa inaan hawada u bilowno su'aal, Miyaad jeclaan lahayd inaad ku xiirto mandiil koronto ama makiinado garka lagu xiro? Xaqiiqdii haddii aad weydiiso qof kasta wuxuu leeyahay fikrad ka duwan tii hore oo ku saleysan waaya-aragnimadiisa, sidaas darteed Maanta waxaan noqonayaa wax yar oo ujeedo ah waxaanan sameyn doonaa isbarbardhiga labada habab, maxaa yeelay mid kastaa wuxuu leeyahay faa iidooyinkiisa iyo qasaarooyinkiisa.
2 Makiinada korontada ku shaqeysa
ka faa'iidooyinka ka sii cad waa inay yihiin fududahay in la isticmaalo, si dhakhso leh iyo wixii ka sarreeya, dhib kuma qabtid inaad dheecaan batteriga, maadaama aadan u baahnayn inaad lacag ku rido. Markaad dhaafto daab, waxay maqaarkayaga ka saartaa unugyo dhintay, iyaguna way ka yar yihiin xiirto koronto, taas oo kuu ogolaaneysa tusaale ahaan marka aad safar aadayso, uma baahnid inaad rarto ama aad raadiso meel aad ku keydiso. Markaad ku xiiraysid mandiil caadi ah, u dhowaanshaha xiirashada ayaa qumman oo dhammaadka sidoo kale.
Dhibaatooyinkeeda waxaa ka mid ah marar badan waxaan sababi karnaa cuncun maqaarka ah, cuncun, dhibaatooyin kajira meelaha qalooca ee wajiga Iyo, marmarka qaarkood timaheenna gadhka ayaa iska joogaya, oo haddaan raadineyno wax yar oo ka fiican, moodooyinka ugu dambeeya ee iibka ah xoogaa waa qaali oo garbaha ayaa si dhakhso leh u gaboobay.
Makiinada korontada ku shaqeysa
Waxaan ku haynaa noocyo badan suuqa dhexdiisa isticmaalkooduna waa soo badanayaa. Waxaan ka heli karnaa iyaga oo leh madax leh aalado wareegaya, ama garbaha birqaya. Xulashadan labaad ayaa ah mid si fudud loo isticmaali karo dhamaadkeeduna waa ka sii fiican yahay hadaad maalin walba isticmaali doontid si maqaarku ula qabsado adiguna aad u gariir fiicnaato timahaaga.
Faa'iidooyinkeeda waxaan ka helnay taas waa hab quruxsan oo dhakhso leh oo loo xiirto, gaar ahaan maalmahaas caajiska ah halkaas oo ay yar tahay in aan waqti u xiirno. Maaddaama ay tahay xiiro qallalan waxaan u isticmaali karnaa meel kasta.
Dhibaatooyinkeeda waxaa ka mid ah kuma degdegaan, gaar ahaan haddii aannu timo gadh aad u dheer leenahay, iyo in meelaha ay adag tahay in la xiirto sida contour-ka afka ama sanka, mashiinku si fiican uma dhaqmo.
Bilowga waa maalgashi, laakiin waxaa habboon in lacag lagu bixiyo mashiinka noocan ah haddii ay hadhow noqonayso aaladda aad xiirto maalin kasta.
Sida aad aragto, midkastana wuxuu leeyahay faa iidooyin iyo qasaarabaHadda waa inaad kaliya go'aansato midka aad go'aansato.
Tartanku wuu dhammaaday, waxaa guuleystey Kike Lozano oo ka socda Madrid.
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » Daryeelka shaqsiyeed » La xiiray » Makiinada korontada lagu xiro ama makiinadaha makiinada garka?
5 makhaayadood oo ku yaal Madrid oo aadan tabi karin
Is dabajooga, isbeddel aad u moodo